Dagayso: DDS oo muhiimada koobaad ka dhigtay wax u qabashada barakacayaasha – AwKutub News
Dagayso: DDS oo muhiimada koobaad ka dhigtay wax u qabashada barakacayaasha
By awkutubnews September 4, 2018
Xukuumadda cusub ee Dawlad Deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in ay qorshaha koobaad u qaateen wax u qabashada dadka Soomaalida ah ee ku soo barakacay colaadaha qawmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya.
Xeryaha qaxoototiga ee Qolaji oo kali ah waxa ku nool dad kor u dhaafaya toban kun oo Soomaali ah oo colaadahu soo baro kiciyeen, sida uu sheegayo wasiirka ka hortagga iyo xakamaynta musiibooyinka ee deegaanka Soomaalida Maxamed Faatax Maxamed.
Colaadahan ayay dad badan kaga kala dhinteen Soomaalida iyo Oromada ka dib markii ay dabo dheeraadeen.
Xukuumadda Faderaalka ah ee Itoobiya ayaa dhawaan ballan qaaday in ay soo afjari doonto colaadda, balse dilka iyo barakicinta ayaa wali sii socota.
Hoos ka dhagayso waraysiga.
Tags: barakacayaal DDS Itoobiya
Previous Entry Faa’iidada oogu jirta Soomaaliya $60ka bilyan ee Shiinuhu uu qoondeeyey Afrika
Next Entry Tababarkii tababarayaasha Waxbarashada Madaniga ee dib-u-eegista Dastuurka oo lagu soo gabagabeeyay Magaalada Jowhar